"UDon Quixote" wabantwana | Uncwadi lwangoku
«Don Quixote» yabantwana
UCarmen Guillen | | iintlobo, Iincwadi, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
"UDon Quijote waseLa Mancha" Ayisiyoncwadi yabantu abadala kuphela kwaye bubungqina bolufundo lulandelayo silunikezela kuwe ukusuka ku- «Don Quixote» yabantwana. Abancinci bethu nabo bafanelwe kukwazi amabali ale ndoda iphambeneyo ethe yabathimba abantu abadala.
Inqaku lethu namhlanje lingumbhiyozo kubo bobabini Miguel de Cervantes, njengoko sele uyazi, kule veki kukhunjulwe Isikhumbuzo seminyaka engama-400 yokusweleka kwakhe njengomhla osamkelayo namhlanje, Nge-23 ka-Epreli, uSuku lweeNcwadi. Siyakholelwa ukuba bobabini abancinci, uCervantes, kunye nomlinganiswa wakhe odumileyo, uDon Quixote, namhlanje kufanelekile ukuba bathenge enye yezi zifundo zimangalisayo. Baya kuthinjwa!
1 "Larousse Del Quixote yam yokuqala"
2 «Ukusuka ku-A ukuya ku-Z kunye noDon Quixote»
3 "UDon Quixote ukhwele phakathi kweevesi"
4 "Kwilizwe laseDon Quixote"
5 "UDulcinea kunye ne Knight Sleeping"
6 Iinyani ezinomdla malunga noDon Quixote de la Mancha
"Larousse Del Quixote yam yokuqala"
Le ncwadi iboniswe ngu Abazobi abathathu abancinci abanjengoJudit Frigola, Saúl M. Irigaray noJosep Mª Juli bazakuzisa omncinci ubulumko kunye noburharha balomfo mncinci obone iingxilimbela endaweni yamatye okusila. "Umtshato wam wokuqala kaDon Quixote" Kukhatshwa sisichazi-magama "samagama anzima" kunye nesalathiso esikuvumela ukuba ufumane ngokukhawuleza zonke izinto ezenzeka kuDon Quixote ekhatshwa nguSancho wakhe othembekileyo kunye noDulcinea wakhe amthandayo.
Bobabini abantwana nabantu abancinci baya kuba nakho ukwazi izinto ezithandekayo ezijikeleze lo mlinganiswa udumileyo kunye nombhali owamdalayo. Incwadi eyonwabisayo, eyonwabisayo kunye nemifanekiso ebonisa apho abantwana kunye nabantu abadala baya kuthandana ngokuba nayo ezandleni zabo. Kufuneka sibonise kananjalo ukuba le yincwadi ekhuthazwa kakhulu ngabazali kunye nootitshala abasele benayo bayifundisa abantwana babo kunye nabafundi.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-160
umhleli: Larousse; Uhlobo: uhlelo (Novemba 20, 2014)
Ingqokelela: I-Larousse-Iintsana / ulutsha-iSpanish-ukusuka kwi-5/6 iminyaka
«Ukusuka ku-A ukuya ku-Z kunye noDon Quixote»
Le ncwadi ibhalwe ngu URafael Cruz-Contarini Ortiz, enceda umntwana ukuba aqwalasele oonobumba ngendlela enesingqisho kunye nomculo ngamagama kunye nee-anecdotes ezithathwe kwincwadi enkulu kaCervantes. Lonke iphepha likhatshwa yimizobo kunye nemifanekiso evuyisayo eya kwenza ukuba ukufunda, kwaye ke ukufunda, kube mnandi ngakumbi kwaye kumnandi emntwaneni.
Ngale ndlela, abayi kwazi amagama amatsha kuphela ukusuka ku-A kuye ku-Z kodwa baya kwazi nokuba ngubani uDon Quixote de la Mancha, awayehamba naye rhoqo ehamba nobuphi ubudenge kunye neekomikhi awayefanele ukuhlala ngasemva kwehashe lakhe URocinante.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-36
umhleli: I-Everest yoHlelo; Ushicilelo: 1 (2005)
Ingqokelela: Intaba emnandi
"UDon Quixote ukhwele phakathi kweevesi"
Ngokukhethwa kwemibongo yeembongi zombini zaseSpain naseLatin American, ezenziwe ngu UAlonso Diaz waseToledo kunye nemifanekiso kaJuan Ramón Alonso, le ncwadi ifundisa ibali likaDon Quixote de la Mancha elifutshane, elinemvano-siphelo elinomculo ngakumbi umculo ngakumbi ezindlebeni zomntwana. Umntwana uya kuthi kwakhona ahlangane nezilwanyana kunye nabalinganiswa abavela kwincwadi yokuqala phakathi kweevesi zayo kwaye uya kufunda ngendlela emfutshane ngakumbi kwaye eyonwabisayo ngakumbi yonke into enxulumene nale ncwadi iyinyani kwaye injalo isuka kumhlaba wethu, ophakathi kweencwadi ezili-100 ezilungileyo yezeMbali, efundwa ngokubanzi kulwimi lwaseSpain emhlabeni.
Uqweqwe oluqinileyo: Amaphepha ayi-48
"Kwilizwe laseDon Quixote"
UCarla noPol ngabahlobo abathanda ukuhamba nokufumana izinto ezintsha kokubini nakwezinye iindawo. Bafuna ukufunda ngembali yendawo nganye abatyelele kuyo kunye nokuthetha nabantu abahlala kwezo ndawo ukuze bababalisele amabali ngazo. Simele sitsho ukuba uninzi lolu hambo luqaliswa nguZum-Zum, ibhaluni ekhethekileyo eye yaba liqabane lakhe elingalinganiyo. Badibana naye ngenye imini kwindibano kwaye ukusukela ngoko bobathathu abakahlukananga. NguZum-Zum, ibhaluni ebakhokelela kwezona meko zingalindelekanga kwaye inoxanduva lwePol kunye noCarla abaphila amava amatsha kwaye anomdla mihla le. Ewe kunjalo, ukujongana nomxholo osigcinayo namhlanje, uCarla noPol ngeli xesha batyelele imihlaba yeDon Quixote de la Mancha, ekhatshwa nguZum-Zum.
Incwadi emnandi kakhulu, kulula ukuyifunda kwaye incinci iyayithanda! Enye yezintandokazi zam ukuza kuthi ga ngoku, ndimele nditsho. Umdlali wakhe URoger Roig César.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-24
umhleli: ILectio Ediciones (ngoFebruwari 1, 2005)
Ingqokelela: Abahlobo beZum-Zum
Ulwimi: IsiCatalan - iSpanish
"UDulcinea kunye ne Knight Sleeping"
Mhlawumbi le yincwadi, ibhalwe ngu UGustavo uMartin Garzo, Eyona nto ichukumisayo kunye ne-nostalgic yazo zonke ezo sizibonisa kuwe kolu luhlu. Ngoba? Ngenxa yokuba nguDulcinea, oyintanda kaDon Quixote, oyena mdala, ubalisela abanye abantwana zonke izinto ezenzekileyo nezikhulu zeli gqala.
Incwadi egqibeleleyo engenzi nje ukuba yenze ibali likaDon Quixote laziwe kowona mncinci kodwa kunye nebali lothando ebelikhona phakathi kukaDulcinea kunye ne knight yakhe.
Ikhava ethambileyo: Amaphepha ayi-118
umhleli: UHlelo Luis Vives (Edelvives); Uhlobo: 1 (Meyi 3, 2013)
Ingqokelela: Isicwangciso sokuFunda
Iinyani ezinomdla malunga noDon Quixote de la Mancha
Ukuba unika abantwana bakho okanye abafundi naziphi na ezi 5 zokufundwa kuka "Don Quixote", unokuzixelela ngokwakho ezinye zezi zinto zilandelayo sinomdla wokukuzisa malunga nalo mntu ubalaseleyo kuncwadi lwaseSpain:
Incwadi ye "UDon Quijote waseLa Mancha" kwakunjalo ebhaliweyo ejele. Masikhumbule ukuba uCervantes wayekhonza isigwebo ngenxa yeempazamo ezenziwe emsebenzini wakhe njengomqokeleli werhafu kwaye wasebenzisa eli "xesha lokufa" emva kwezitshixo zokuvelisa lo msebenzi mhle kangaka.
Incwadi inenxalenye yesibini, enye enye inkqubela ukuba uCervantes ngokwakhe uthathe isigqibo sokubhala emva kokushiya icandelo lesibini lobuxoki. Olu hlobo aluphelanga ngokupheleleyo kodwa Yapapashwa ngo-1615, kwiminyaka emibini emva kokufa kwakhe.
Njengoko besitshilo ngaphambili, Yeyona ncwadi ithengwa kakhulu ngeSpanish, kunye neyona ithengiswa kakhulu embalini, emva kweBhayibhile. Kuqikelelwa ukuba ngaphezulu kwe Iikopi ezingama-500 ezigidi.
Kuthiwa igama likaDon Quixote de la Mancha liphefumlelwe sisizalwane se ICatalina de Salazar y Palacios, Umfazi kaCervantes.
La inguqulelo yokuqala ukusuka kuDon Quixote ukuya kolunye ulwimi yayi ngesiNgesi, kwaye yenziwa nguThomas Shelton Okwangoku, iDon Quixote iguqulelwa kwiilwimi ezingaphezu kwama-1608.
UCervantes wabhala le ncwadi ecinga ngolwimi lwesiCastilian ngolwanamhlanje kunolo lwalukho ngelo xesha. Kungenxa yoko le nto kufuneka simbulele umbhali, i siluphucule kakhulu ulwimi lwethu.
En 1989, enye ikopi ekhethekileyo yohlelo lokuqala UDon Quixote kuthengiswe nge- $ 1.5 yezigidi. Kukho iikopi ezimbalwa kuphela, kwaye incwadi igcinwe ikwimeko entle kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » «Don Quixote» yabantwana
Inqaku elinomdla. Kwezi zithandwa zisixhenxe wayezazi ezine. Ndibambe ingqalelo yokuba enkosi kuCervantes, iSpanish iphuculwe kwaye yaphuculwa. Nangona kunjalo, ubanga ukuba icandelo lesibini lapapashwa ngo-1615, kwiminyaka emibini emva kokufa kwakhe. Oku akunakwenzeka kuba uCervantes wasweleka ngo-1616.
Izolo bendizimase inkomfa ebibanjelwe e-Oviedo nguTrevor J. Dadson, uNjingalwazi wezifundo zeSpanishi eQueen Mary University yaseLondon. Uyingcali ehloniphekileyo kwi "Don Quixote." Yayintle kakhulu, ndiyithanda kakhulu. Enkosi kuye ndafunda ngakumbi ngeCervantes kunye nomsebenzi wakhe ongafiyo.
Ukuwolana kunye noSuku lweNcwadi olumnandi
Ezinye zezitulo ezinkulu ezaziwayo zemisebenzi yoncwadi
UCharlotte Brontë wazalwa kwiminyaka engama-200 eyadlulayo